कस्को लापरवाहीले मृत्यु भयो ६ महिने गर्भवती शोभाको ? (भिडियोसहित) - PaschimNepal.Com
कस्को लापरवाहीले मृत्यु भयो ६ महिने गर्भवती शोभाको ? (भिडियोसहित)
सुशील खड्का । सुर्खेत | प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज ११, २०७३ 2:49:07 PM
अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भयो : आफन्त
अस्पतालले उपचारमा कुनै लापरवाही गरेको छैन्, आरोप गलत हो : निमित्त प्रमुख डा. खड्का
अत्यधिक रक्तश्रावले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा उपाचार गराइरहेकी ६ महिने एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ । दैलेख बाँसी–४ देउनबाडाकी करिव २२ वर्षिय शोभा शाहीको मंगलबार विहान १० बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
सोमबार साँझ ८ बजे एक्काशी रक्तश्राव भएपछि थप उपचारको लागि शोभालाई रातारात क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत ल्याइएको थियो ।
दिदी शोभाको मृत्यु भएपछि भावहिल बनेकी उनकी बहिनी बेदना । तस्वीर : सुशील तर आफन्तले भने अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स र अन्य कर्मचारीको लापरवाहीले शोभाको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘(मंगलबार) विहान ४ बजे क्षेत्रीय अस्पतालमा शोभालाई ल्याएका हौं, तर डाक्टर नै थिएनन् ।’ शोभाका ठुलाबुवा कर्णबहादुर शाहीले भने,–‘रातारात दैलखेबाट सुर्खेत ल्यायौं, यहाँ हुन्न भन्दिएको भए हामी नेपालगञ्ज लिन्थ्यौं तर डाक्टरले केही पनि भनेनन् । अन्तत छोरी मारे ।’
आफन्तले अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले नै मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । शोभालाई सोमबार राती एक्काशी विरामी भएपछि बाँसी स्वाथ्य चौकीमा सामान्य चेकअप गरिएको थियो ।
तर त्यहाँ कार्यरत अहेवले यहाँ सम्भव नहुने भन्दै सुर्खेत लैजान भनेका थिए । राती करिव १२ बजे दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिका हुँदै शोभालाई थप उपचारको लागि सुर्खेत ल्याइएको कर्णबहादुरले बताए ।
शोभााक आफन्तहरु ४ बजे क्षेत्रीय अस्पताल ल्याउँदा अस्पतालले इमरजेन्सी कक्षमा नलिएर सिधै प्रसुती कक्षमा लिएको कर्णको भनाई छ । ‘विरामीलाई भित्र पठाएपछि एकपटक पनि आफन्तलाई भेट्न दिएनन् ।’ कर्णले थपे,–‘एक्काशी १० बजे डाक्टरले बोलाएर सरी हामीले बचाउन सकिनौं भनेर खवर दिए ।’
बारम्बार शोभाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न खोज्दा अस्पतालमा कार्यरत नर्स, डाक्टरहरु रिसाउने गरेको आरोप आफन्तको छ । शोभाको उपचार भैरहेको बेला उनकी बहीनी वेदना शाही मात्रै साथमा थिईन् ।
तर वेदनाले आफ्नी दिदीको मृत्यु नभएर नर्सहरुले मारेको आरोप लगाइन् । ‘पानी देउ पानी देउ दिदीले भन्दा पनि पानी नै दिएनन् ।’ वेदनाले भनिन्,–‘उपचारमा चरम लापरवाही हुँदा दिदीको मृत्यु भएको हो ।’
के भने आफन्तले भिडियो हेर्नुस् ।
दिदीलाई सुताइएको बेडमा डाक्टर र नर्स कमै मात्र आउँदा एक्काशी मृत्यु भएको वेदनाको भनाई छ । ‘ज्यान बचाउँने अस्पताल हैन् यो, मार्ने अस्पताल हो ।’ आक्रोश हुँदै बेदनाले भनिन् ।
यता, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डन डा. डम्बर खड्काले अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु नभएको बताएका छन् ।
उनले अस्पतालले गर्ने सवै कामहरु गर्दा गर्दै एक्काशी मृत्यु भएको जानकारी दिए । ‘हामीबाट लापरवाही भएको हैन्, नर्सले रगत ल्याउन भन्नुभयो । ढिला आएपछि हामी असफल भयौं । लापरवाहीले गर्भवतीको मृत्यु भएकै हैन् ।’ डा. खड्काले भने,–‘एक्काशी हुने यस्ता घटना भएपछि अनेक आरोप लगाउनु दुःखद् हो । हामी कसैको जीवन माथि खेलवाड गर्दैनौं । बचाउनै प्रयास हाम्रो हो ।’
सुशील खड्का । सुर्खेत2Comments on कस्को लापरवाहीले मृत्यु भयो ६ महिने गर्भवती शोभाको ? (भिडियोसहित)
धर्मराज शाही // September 27, 2016 at 11:51 pm // Reply	दुःखद् घटना हेर्दा अस्पतालका कर्मचारीको चरम लापरबाही देखिन्छ यस्ता कर्मचारीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ।र संबंधित लापरबाही गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
दि बि मगर // September 28, 2016 at 12:26 pm // Reply	डम्बर खद्का को नर्सिङ होम मा उपचार गरेको भये हुन्थ्यो कि??????